Ilaha Dadka Naafada ah | CareerForce
Aamin waxa soosocda
Waxaad aad ugu diyaar garoobi kartaa taalaabo abaal marin leh oo xirfadeed. Waxaad lahaan kartaa xirfado aadan wali kushaqaysan intaad baarayso goob shaqo oo dhib badan. Waxaad ubaahan kartaa caawimaad dheeri ah oo lagaa siiyo inaad yoolkaas gaarto. Waxaan leenahay ilo badan oo loogu talagalay in lagu taageero ilo badan oo hadafyada xirfada ah iyo baahiyaha naafada. Waxaa kamid ah:
Vocational rehabilitation services (Adeegyada baxnaaninta Tababarka)
Hormarinta Tababarka iyo Xirfadaha
Xaquuqda goobta shaqada
Macluumaadka xubnaha qoyska iyo masuuliyiinta
Kala xariir lataliye katirsan Vocational Rehabilitation Services (Adeegyada baxnaaninta Tababarka) hadda adoo kala xariiraaya VRS.CustomerService@state.mn.us si aad ubiloowdo safarka cusub ee hadafyada xirfadaada.
Akhri ilahaan dheeriga ah ee xirfadaha oo loogu talagalay dadka naafada ah:
Macluumaad badan ka ogoow talo bixinta, tababarka iyo hormarinta xirfadah
Macluumaad badan ka ogoow xeerka dookha faahfaahsan
Baro macluumaad kusaabsan caawimaadaha goobta shaqada
Akhri adeegyada dhalinta naafada ah
Arag dookhyada taageerada xirfada mudada dheer
Macluumaad badan ka ogoow caawimaada xorimo kunoolaan shaha
Baro sida shaqada iyo gunooyinka naafadu iskula socdaan